Baaq Ku Wajahan Xukuumada DDS. – Xeernews24
Baaq Ku Wajahan Xukuumada DDS.
Anagoo ugu mahad celinayna dadaalka ay xukuumadu ugu jirto sidii loo sugilahaa amaanka nafta iyo maalka shacabka deegaanka gaarahaan galbeedka Sitti iyo sidii xal waara oo nabadeed looga gaadhi lahaa colaada soo noqnoqatay ee galbeedka Sitti, taasoo saldhigeedu yahay duulaanka canfarta iyo qadiyada magaalooyinka Cundhufa,Cadhaytu iyo garbaciise waxaan xukuumada DDS gaarahaan madaxwaynaha DDS mudane Mustafe Mohumed Omer ugu baaqaynaa.
1. In kahor shirka nabadeed ee labada qoomiyadood laga shaqeeyo xoogana lasaaro sidii maamulka canfarta looga siidayn lahaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ay afduubka u haystaan, maadaama uuna jirin 1 qof oo canfar ah oo kujira gacanta shacabka iyo xukuumada DDS oo afduub loo haysto.
2. In xukuumada DDS aysan marna wada hadal iyo gorgortan kagalin dhulka kabaxsan 3 magaalo ee horay sida xaaraanta ah canfarta looraaciyay.
3. In odayaasha, waxgaradka iyo aqoonyahanka deegaanka gaarahaan kuwa aqoonta uleh dhulka canfartu inagu haysato ee reer Sitti lasiiyo ahmiyada 1aad ee talada go,aankasta oo masiirka dhulka kusalaysan.
4. In xukuumada DDS aysan marnaba aqbalin in maamulka iyo haayadaha amaanka canfarta lagusooceliyo 3da magaalo kahor inta Afti ama go,aan dawladeed oo lagusoo wareejinayo 3da magaalo ee Cundhufa,Cadhaytu iyo garbaciise laga gaadhayo.
5. In wadahadalkasta oo kusaabsan 3da magaalo uu noqdo oo kaliya A. In Bulshada dagan afti kama danbays ah laga qaado. B. in go,aan lamid ah kii shalay canfarta loogu wareejiyay hadana lagusoo celiyo.
6. Waa in waxwalba iyadoo maslaxo la,eegayo hadano loo wajaho gar cadaawe.
7. Waa in bulshada deegaanka lala wadaago go,aankasta oo masiiri ah oo saamayn kuleh dhul iyo dad soomaaliyeed islamarkaana aan marna xaqiiqada dhabta ah bulshada laga daboolin.
8. Waa in xukuumadu aysan marna ogolaanin in dhulka kabaxsan gudaha 3da magaalo lagasaaro haayadaha amaanka deegaanka, maadaama aan ognahay in maamulka canfartu ay deegaamayn cusub kasamaynayaan goobkasta oo dagan goorkasta oo ay fursad helaan.
9. Waa in xukuumadu ay lahaataa go,aanka balse talada iyo soo bandhigida xogaha dhabta ah ee waxwalba oo aan miis wada hadal latagayno loo xulo dad aqoon, iimaan iyo aqli usaaxiib ah xogogaalna u ah waxa laga wada hadlayo.
10. Waa in xukuumadu miiska latagto qorshe bulshada 3da magaalo lagu gaadhsiinayo adeegyada aasaasiga ah ee dawlada kahor intaan go,aan rasmi ah kaga gaadhin, jidkii ay doontaba ha umartee.
SHACABKA GALBEEDAKA SITTI IYO GUUDAHAANBA DDS.
Waxaa Waajib Inagu ah inaan kafogaano waxwalba oo dhabarjab kunoqon kara dadaalka xukuumada islamarkaana caqabad inagu noqon kara.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/Baaq.jpg 127 396 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-21 19:41:012019-10-21 19:41:01Baaq Ku Wajahan Xukuumada DDS.
Akhrista: Maalmihii Jaalle Siyaad Ee October 21, 1969-January 26, 1991. Mareynkanka oo madaxweyne Farmaajo ku cadaadinaya inuu ka hadho Kiiska Dacwada...